China Yakazara yerabha mahwendefa vagadziri uye vanotengesa | Meiao
Meiao yekudzidzira bhamba bhaundi rerabha.
Kurema ndiro ndiro chakanyanya kushandiswa uye kushungurudzwa chidimbu chemidziyo mune chero gym.
☆ Solid simbi rim bushing ine maindasitiri akaoma chrome nzvimbo.
☆ Inowanikwa kune rumwe ruzivo nezvetsika marogo
☆ Hora rabha yakavharirwa mahwendefa anovimbisa kuwedzerwa kusimba.
☆ Ose marabhuru bumper mahwendefa ane hupamhi hwakaenzana (17.7 ”)
☆ Mapuratifomu ekudzidzira maOlimpiki, Fitidza iyo Olimpiki bhaa.
☆ Inowanikwa yeLB uremu mucherechedzo: 10LB / 15LB / 25LB / 35LB / 45LB / 55LB uye KG uremu mucherechedzo: 5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg
☆ Yakachengeteka kushandiswa kwepuratifomu. Dema bhamba bhata rakachengeteka kudonha pamapuratifomu ehuni kana yemitambo rabha pasi. Izvo hazvikurudzirwe kudonhedza pane kongiri kana zviyero zviyero.
Yakakwira mhando yakaomeswa yerabha dhizaini inoita kuti iwe usimudze uye udonhe pasina kukuvadza ako pasi, isina ruzha kupfuura echinyakare simbi mahwendefa ane mashoma bounce kune akawedzera chengetedzo simbi isina chinhu inoisa inotsvedza uye kudzima huremu mbariro nyore peel. Chip uye bloom-nemishonga yekushandisa kwenguva refu
Pashure: Rabha Hex Dumbbells
Zvadaro: 3tri-hole rabha ndiro
Standard uremu vachisimudza Olympic makwikwi cu ...
Ruoko grip tri grip 3 maburi dema rabha yakavharwa ...
Wholesale Kumusoro kwakasimba kwakaoma chrome weightlift ...
Makwikwi kudzidziswa Akajeka Ruvara Nhema Rubber Plat ...
Makwikwi Rakajeka sando Rubber Plates Bumpe ...
Hot Sale michina uremu vachisimudza Chrome barb ...